inkonzo yokukhetha amangalele kakhulu
iibheringi agiqekayo sifike iintlobo ngeentlobo ngeentlobo, iimilo kunye nomlinganiselo. Ukuyila ilungiselelo amangalele lothuli kuyimfuneko ukuba ukhethe uhlobo amangalele ezifanelekileyo ukumisela ubukhulu ukuthwala efanelekileyo. Noko ke, ilungiselelo yabangela njani kuphela kuqulatha iibheringi kwabadlali kodwa kuquka amacandelo enxulumene iibheringi ezifana kwizikhondo kunye nezindlu. Le igrisi kwakhona ibaluleke kakhulu ilungiselelo lokuzala kuba kufuneka ukunqanda kukuwohloka ukukhusela nxamnye umhlwa ukuze ezichaphazela nga nibafaka ukusebenza ngokupheleleyo. Ngaphandle kwezi, itywina naye ibaluleke kakhulu, ukusebenza apho kubaluleke kakhulu ukuba ukucoceka le lesithambiso. Ngaphezu koko, nezinye izinto ezininzi ziye ukuba ukuqwalaselwa, ezifana avukwe ezifanelekileyo bethwele kugqitywe lwangaphakathi okanye ukulayisha, izixhobo ubambe kunye nokufakwa kunye nokususwa iindlela, njl
Ukudala ngempumelelo ixabiso kubathengi kufuna ukuqonda nzulu oko abathengi zifuna ngokukodwa kufuneka ngokumalunga iimveliso kunye neenkonzo. Ngabathengi kuveliso series elikhulu iimveliso ezifana izithuthi, izixhobo zombane zasekhaya, iimpompo kunye Iimoto zombane kufuneka iimfuno ezikhankanywe kakhulu futhi ulukhuni ngokuphathelele ubugcisa, umgangatho, eyokucwangciswa kunye nexabiso. sizinikela kuwe izisombululo standard yaye zifanele ukuba ukwazi ukuphucula intsebenzo kunye, ngaxeshanye, ukunciphisa iindleko zizonke.
Ukuba nako kwethu ukusebenza ngokusondeleyo kunye nabathengi - ekubeni liqabane uyilo ngempumelelo - sisiseko impumelelo Viproce kaThixo. ukuqonda weenjineli zethu ukuba isicelo ngasinye yahlukile. Thina zinembali ende ekunikeni izisombululo ezintsha kunye neendleko-kakuhle, ezikunika yoyilo bakho nokhuphiswano.
Viporce rhoqo ayile iibheringi ezizodwa kude ngaphaya umda komgca yethu imveliso eqhelekileyo. Nokuba ezincinci okanye ezinkulu, kunye neempawu ezizodwa, okanye ezenziwe izinto ezikhethekileyo, sinawo amava ukuyila isisombululo elilelona.
Ezinye izisombululo kakhulu siye eyenzelwe zibandakanya 1mm ukuya ngobubanzi 8 "isikhondo, avela 25,000 lbs. [11.340 kg], amaqondo ukusuka -320 ° F ku 600 ° F [-195 ° ku 315 ° C], amachiza kunye nokumelana UV. Okunye ngokuqhelekileyo, iinjineli zethu bayile ukuze lusebenze, ukusetyenziswa eziphathekayo okanye indawo efunekayo okhethekileyo efunwa isicelo okanye ibandla inkqubo.
Nciphisa lakho Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Indleko
Certificate of imvelaphi registratio n
General Certificate of imvelaphi, ubhaliso kunye nokukhutshwa (C / O), GSP, isiqinisekiso imvelaphi, ubhaliso kunye nokukhutshwa (forma, FORME)
Translation, mail impendulo, uthetha-thethwano ishishini
Nokufumana indawo, ethwele kwikhabhinethi, ukwenza amaxwebhu izithethe sibhengezo, declaration amasiko kunye namaxwebhu zavunyelwa
irekhodi Online, amaxwebhu, ukuqinisekiswa
ngokutsha uxwebhu, ungeno ulwazi, imali ebuyayo declaration